Roobab lagu diirsaday oo ka da’ay inta badan Gobolada wadanka Ogadenia. | ogaden24
Roobab lagu diirsaday oo ka da’ay inta badan Gobolada wadanka Ogadenia.
Nov 20, 2016 - Aragtiyood
Xili Abaaro iyo Jiilaal aad u kulul lagu Jiray dhibaato badana ay haysatay dadka kudhaqan dhulka miyiga ah iyo Tuulooyinka, ayaa waxaa kada’ay inta badan Gobolada Ogadenia Raxmaadkii Alle oo lawada sugayay.
Wariyaha Ogade24 ee magaalada Jigjiga ayaa kusoo waramaya in Gobolada Nogob Shiniile Jarar Qoraxay Doollo ilaa iyo Shabeele, ay kada’een Roobab siwayn dad iyo duunya ba, meelaha Roobabka mahiigaanka ahi kada’een ayaa waxaa kamida Gobolada Shiniile Nogob iyo Jarar.
Dhinaca Gobolada Qoraxay Doollo iyo Shabeele oo kamida meelaha sida wayn Abaaraha iyo Kulaylka Jiilaalku u saameeyay, ayaa waxaa kada’ay Roobab aan lamid ahayn kuwa kada’ay dhinaca Shiniile iyo Nogob oo Roobab xoogan laga soo sheegayo.
Guud ahaan waxaa la dareemayaa saan saanta Roobka waxaana cirka ka muuqda daruuro madow aadna waxaa looga Raja qabaa in Roobka bilawga ah uu Guud ahaan si wanaagsan uga wada di’i doono deegaamada kala duwan ee laga dareemayo abaarta iyo kulaylka xad dhaafka ah.
Gobolada Bari ee wadanka Ogadenia ayaa waxaa siwayn uga jiray Abaar aysan jirin cid uga Gurmatay dadka Xoola dhaqatada ah, kuwaasi oo isugu tagay deegaamadii Horay Roobku uga da’ay taasi oo keentay in durba cagta la mariyo wixii baad iyo biyo ahaa.